admin | Somaliwayn	Home
Stories written by admin	Muuse Suudi “Anaga waxaa nala siiyay Wasiirka Qaraxyada lagu qabsado iyo Wasiirka Qaraxyada ka hadlaya…”
Senator Muuse Suudi oo furka tuurtay ” ‘Hirshabeelle in la kala diro ayaa laga shaqeynayaa, Madaxweynaha iyo Madaxweyne kuxigeenka waa la isku dirooyaa, anaga waxaa nala siiyay Wasiirka Qaraxyada lagu qabsado iyo Wasiirka Qaraxyada ka hadlaya, inta kale waa ku dulmanahay”.
Halkan Ka Dhageyso Halkan waxaad si toos ah (Live) uga dhageysan kartaa Idaacada Somaliweyn Radio oo aan soo galno maalin kasto oo Sabti ah saacada 16.00 -18.00 ee Sweden ama saacada Somalia 06.00-08.00 fiidnimo waxaana uu ka soo galaayaa mowjada FM 88.0 ee magaalada Gothenburg Sweden. Waxaad si toos ah uga dhageysan kartaan barta internetka aanu ku […]
SOOMAALIDU WAA ISKU ASAL BAARITAAN DNA LAGU SAMEEYEY
Soomaalida 77.6% DNA-deedu waa isku mid. DNA aabbaha dhankiisa 77.6% waa V-32 Haplogroup. Hiddosidaha (Chromosome)-ka aabbaha laga dhaxlo (Y-chromosome) ee uu aabbuhu wiilkiisa siiyo, oo fac-ka-fac xagga aabbaha la iska soo dhaxlayey, waa isku mid.
Guddoomiyihii Hore ee G. Fulinta Ahlusunna oo ka hadlay heshiiskii burburay
Guddoomiyihii hore ee Golaha Fulinta Ahlusunna Waljamaaca ee Gobollada dhexe ee Soomaaliya Mudane Cabdi Cali Fiidoow oo aan Khadka Telefanka kula xiriirnay isaga oo ku sugan Waddanka Dibaddiisa ayaa wuxuu noo sheegay in uu aad iyo aad uga xun yahay Burburka ku yimid Wadahadalladii Muqdisho uga socday labada Maamul ee is diidanaa muddada.
WIIL IYO AWOWGIIS IYO SHEEKO GAABAN!
Wiil qurbaha in badan waxbarasho ugu maqnaa, ayaa dib ugu soo laabtay Dalkiisa Soomaaliya. Guriga awowgiis oo ku yaal xaafad ka mid ah xaafadaha caasimadda muqdisho,ayuu wiilku ku soo degey. Dhowr beri markuu joogey beledka , wuxuu soo ogaadey in awoowe uu kalsoonidii kala noqday Dawladda cusub taasoo uu ku iclaamiyey warbaahinta gudaha.
Madaxweyne Siilaanyo “Marnaba lagama yaabo inay mar sadaxaad dib u dhacdo Doorshada Somaliland..”
Axamed Maxamed Maxamuud Siinlaayo Madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa Shacabka Somaliland ku dhiiri geliyey qaadashada kaarka diiwaan gelinta cod bixiyayaasha oo 29 bishan ka bilaabaneyso gobolada Salal Saaxil iyo Owdal wuxuuna sheegay inay isku wadi doonaan samata bixinta dadka abaaruhu ku heystaan Somaliland iyo bixinta kaarka diiwan gelinta cod bixiyayaasha.
Qolo ayaa u timid Cali Ibnu Abi Dalib, waxa ay waydiiyeen ciidanka Allah ka ugu xooga wayn. Ciidamada Allah way ay badan yihiin laakiin si cajiib ah ayuu ugu jawaabay. Sheekadii dhex martay Cali iyo qoladaas hoos ka daawo. Fadlan sii faafi hadii aad awoodo.
1-Dowladdii kacaanka ayaa markeey laba kacleeysay kadib ,waxay u dirtay wadamada Sucuudiga, Talyaaniga iyo Ingriiska wafdi ay wada hogaaminayaan saddax masuul oo ku wanaagsan luqada wadamadaa. Markii Sucuudiga la tagay ayaa kii carabiga yaqiin si uu dadka isku baro ku yiri: Annaa Wasiiru Daabulaat Al- arli Wa Samaawaati.( waxaan ahay wasiirka duulimaadka cirka iyo dhulka). […]
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay shirka bisha May ee sanadkan ka furmaya Magaalada London, kaasi oo uu ka qeyb galayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in shirka London uu yahay mid ka shaqeyntiisa ay soo bilaabatay inta aan Doorashada la gelin, kaasi oo Dowladda Ingiriiska ay ugu […]
Guddoomiye ku/Xigeenka 1-aad ee Baarlamaanka oo deeq siiyey barakacayaasha
Guddoomiye ku/Xigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka ayaa Maanta Deeq Macaawino ah Gaar_siiyay qosas Barakacayaal oo ku dhaqan duleedka Magaalada Muqdisho.
War Deg Deg Ah: weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo goordhow lagu qaaday Labo Wiil oo Walaalo ah mid ka mid ah dagmooyinka Muqdisho
Kooxo hubeesan oo watay gaari nuuca raaxada ah ayaa lagu sheegay in goordhaw xaafada Siligi Ameerikaanka ee katirsan degmada Wadajir dil iyo dhaawac ugu geesteen labo wiil oo walaalo ahaa.
Ra’isul Wasaaraha Somalia oo lacag ku dhow hal milyan oo dollar ku wareejiyey Guddiga Gurmadka abaaraha… (Daawo sawirro)
Ra’isul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka qeyb galay kulan dhaqaale loogu aruurinayey dadka Soomaaliyeed ee ku dhufteen abaaraha, waxana intii uu socday kulanku Xukuumaddu soo bandhigtay dhaqaale ay ugu talagashay abaarta ka jira Soomaaliya.
Banaan Bax ka dhan ah Madaxda Hir-Shabeelle Oo Ka Dhacay Baladweyne iyo Odayaal dhan oo wali u xiran maamulkaasi
Boqolal Dadweyne ah oo ka soo horjeeda Madaxda Maamulka Hir-Shabeelle ayaa maanta Dibad Baxyo Rabshado Wata ka dhigay Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobalka Hiiraan kuwaasi oo ku dhawaaqayey Erayo ka dhan ah Madaxweynaha Hir-shabeelle.
Falanqeynta Maanta: Mashruuca Villa Somalia Mogadishu, Goorma dhamaan ?
Dawlada nimada soomaaliya wixii ka danbeeyey Dagaalkii sokeeye waxaa la bilaabay mashruuc aan u bixiyey hergelinda Dawladnimo ee mashruuca villa Somalia Dhamaan madaxweynayaashii deganaa xarunta villa somalia ee ay war diyeeyaan ciidanka AMISOM. waxay isaga mid yihiin inay xalkeenaan Si loo helo Dawlad wanaagsen.
Waxaa ku bilaabi doonaa qormadaan shir ka dhacay Magaalada Bahar Daar ee dalka Itoobiya 22-23 April 2017,shirka madaxda Africa ee Tana High Level Forum.(Natural Resource Governance in Africa) Shirkaan waxaa kasoo qaybgaleen Ra’iisul waaraha dalka Itoobiya, Hailumarim Desalegn iyo sidoo kale Madaxweynayaasha dalalka Brundi,Botswana,Liberia,Malawi,Nigeria,Sudan iyo dalka Maser.
Dhul Boob ka socda Halkii uu ku dhisnaa Dugsiga sare ee Maxamuud Axmad Cali.
dhismihii Dugsiga sare ee Maxamuud Axmad Cali oo ku yaala Degmada Kaaraan, iyadoo uu dugsigaasi ahaa dugsiga sare ee kaliya ka jiri jiray degmada Kaaraan xiligii Dowladii Marxuum Jen Maxamed Siyaad.
Soomaaliya: Ka jawaabidda Xaaladda Deg degga ee Abaarta
Xaaladda bani’aadamnimo ka jirta Soomaaliya waxa qarka u saarantahay in ay gaarto heer musiibo ah, waxaana sii kordhaya walaaca ah in dhabaha ay ku socoto si wel wel leh ula mid tahay musiibadii abaartii ka dhacday Soomaaliya 2011-kii oo dad lagu qiyaasay 260,000 qof ay ku naf waayeen. Maanta dad lagu qiyaasay 6.2 malyan oo […]
Waa Yaab: Wixii inkaarta ahaan jiray oo Duco noqday.!!!
Waxaan maqli jiray iyada oo la isku inkaarayo.dhìig sukeeyo ha ku galo.cawa ayaan ogaaday in ay duco noqoqon karto.markii dhaqratkii aan la joogay igu yiri:magaalada ma joogaan igu yaraan 2 qof oo aan dhiig ka qaadno òo aad qaraàba tihiin.waxaa ku iri maya.
Sarkaal Sare oo ka tirsan Ciidamada Nabadsugida oo goordhow lagu dilay Muqdisho.
Kooxo hubeysan ayaa Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir ku dilay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa Ciidanka NISA.
Xabsiga Magaalada Baledweyen ee gobolka Hiiraan oo laga siidaayay Odayaal dhawaan lagu xiray halkaas
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Baledweyen ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta Xabsiga Magaalada Baledweyne laga siidaayay 7 oday dhaqameed oo maalmihii lasoo dhaafay halkaas ku xirnaa. Xariga Odayaashaan ayaa yimid ka dib markii nin ay isku heyb yihiin oo Askari ah uu dilay qof shacab ah ka dibna ay Odayaashu ay […]
Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay Maareeyaha Guud ee Hay’adda Saadaasha & Duulista Hawada
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi (Farmaajo) ayaa maanta u magaacabay Maareeyaha Guud ee Hey’adda Saadaasha iyo Duulista Hawada Yuusuf Cabdi Cabdulle (Yuusuf Jaalle). Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu shaaciyay in Yuusuf Jaalle si rasmi ah loogu magacaabay xilka Maareeyaha Guud ee Hey’adda Saadaasha iyo Duulista Hawada, iyadoo xilka laga qaaday Mr. C/waaxid Sheekh […]